Baadhitaanka joogtada ah ee Gawaarida Adeegga ee Gaadiidka Amni ee Ardayda Mersin | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinBaaris joogto ah ee Gawaarida Adeegga ee Gaadiidka Amni ee Ardayda ee Mersin
27 / 10 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Adeegyada waxaa si joogto ah looga ilaaliyaa gaadiidka aaminka ah ee raaxada leh ee ardayda Mersin
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii waddaa kormeer adeega ah oo loogu talagalay gaadiidka ardayda ee badbaadada leh. Kooxaha Qaybta Booliska ee Dawlada Hoose ee Magaalooyinka waaweyni waxay sameeyaan kormeer xaga amniga adeega ah iyagoo sax ah iskuulada magaalada oo dhan. Baadhitaanadan heerka-sare ah waxay ujeedadoodu tahay inay hubiyaan in ardaydu samayn karaan gaadiidkooda inta u dhaxaysa dugsiga iyo guriga si nabad ah oo raaxo leh. Dhibaatada ugu badan ee la kulantay intii ay kormeerku socday ayaa ah wareejinta ardayda oo la sheegay tirada shatiga lagu sheegay.
Gaadiidka aaminka ah ee raaxada leh ee ardayda
Marka la eego baaxadda kormeerka gawaarida adeegga waxaa si joogto ah looga fuliyaa dhammaan iskuulada magaalada oo dhan, gaadiidleyda adeega ee ka shaqeeya Iskuulka Hoose ee Barbaros ee Degmada Yenişehir waxaa kormeeray kooxaha Qeybta Booliska ee amaanka gaadiidka ardayda.
Baadhitaannada, arrimaha ay ka midka yihiin kontoroolka dokumentiga gawaarida, haddii ay ardeyga u wataan iyadoo la raacayo tirada ku qeexan shatiga waxaa loo qaataa mudnaanta. Intaa waxa u dheer, suunka gaadhiga gawaarida, tuubbooyinka dab-damiska, hagaha ardayda, rukhsadaha wadada, daaqadaha aan go'an, sida xakamaynta nidaamka qafiska birta haddii shuruudaha si wanaagsan loo baarayo.
Qalabka adeegga 282 waa la hubiyay
Baadhitaanno joogto ah oo lagu sameeyo dugsi kale maalin kasta inta lagu jiro muddada waxbarashadda, ujeeddadiisu tahay in la hubiyo in gaadiid raaxo leh, raaxo leh oo nabadgelyo leh ardayda. Daqiiqadaha baaritaanka ee la xiriira cilladarada la arkay muddadii baaritaanku socday ayaa la habeynayaa dacwadaha dambiyadana la adeegsadaa.
Kooxuhu waxay kormeerayeen gaadhiga adeegga 2019 ilaa bilowgii xilli ciyaareedkii 2020-282. Gawaarida 10 ayaa la ciqaabay kadib markii ay ku guuldaraysteen inay u hogaansamaan shuruudaha la cayimay. Intii lagu guda jiray kormeerka, ardayga waxaa lagu xukumay inuu haysto wax ka badan tirada shatiga lagu sheegay. Kooxaha, gaari kasta oo celcelis ahaan ah 320 TL rigoore gooyay.
Shaqaalaha ayaa sidoo kale ku qanacsan kormeerka
Muujinaya qanacsanaanta wadaha adeegga Mehmet Celik, “Waxaan u maleynayaa in codsigu yahay mid aad u wanaagsan, codsiyada noocan oo kale ah waa inay ahaadaan. Waxaan ku dadaalnaa sidii aan u hubin lahayn badbaadada carruurta. Waxaan daba joognaa shaqadeena intii karaankeenna ah. Waan ku faraxsan nahay kormeerka degmada ”.
Waxaa mahad leh Duqa Seçer, oo ka mid ah darawalada adeegga
Kemal Erkoç, oo ah adeegaha uga mahadceliyay Duqa magaalada Vahap Seçer kormeerrada adeegga dugsiga ee lagu fuliyay baaxadda tallaabooyinka amniga, wuxuu yiri, "Dhaqamadaan aad ayey u wanaagsan yihiin waxaanan aragnaa khaladaadkeenna. Ma lihin dukumentiyo maqan, waxaan shaqadeena u qabnaa carruurteenna. Mr. Vahap ayaa aad u daneynaya arrimahan. Ma jirin baaritaano noocan oo kale ah kahor. Mahadsanid madaxweynaha. Waxaan qabnaa howlaheena intii karaankeenna ah.
Batur Kandemir, oo ka mid ah ardayda Dugsiga Hoose ee Barbaros ayaa yidhi, “Aad ayaan ugu faraxsanahay saaxiibbaday iyo marti-qaadka adeegga. Qaar ka mid ah adeegyada ayaa u dhaqma si mas'uuliyad darro ah isla markaana uma oggola carruurtu inay xirtaan suumanka suunkooda oo ay sababaan shilal la mid ah. Taasi waa sababta aan u maleynayo inay wax fiican ka qabanayaan baaritaanka hanti dhowrka.
Kooxaha Qeybta Booliska ee Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, 444 21 53 xarunta xarunta, iyaga oo tixgalinaya dhamaan noocyada cabashooyinka ku saabsan baabuurta adeegga iskuulka, ayaa sameynaya hawlgallada lagama maarmaanka ah.
Qalabka adeegga ardayda
Lambarka taleefanka booliiska Mersin
Gawaarida Adeega Ardayda Mersin si joogta ah u kormeer